ဖက်ရှင်အမျိုးသမီးလက်ကိုင်အိတ်ခါးပတ် - အားကစား, လူငယ်, branded, ဒီဇိုင်နာ, သားရေ, ရွရွပြေး
တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူ့ပုံရိပ်ကို၏ဖန်တီးမှုအပေါ်အချိန်အများကြီးသုံးစွဲသည်။ အထူးသဖြင့်, အထူးအာရုံစိုက်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသယ်ဆောင်ရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်မှုမှပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအလွန်ဖက်ရှင်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အသက်တာကိုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာအရှိဆုံးအဆင်ပြေ options တွေကိုတစ်ခုမှာယင်းဗီရိုပစ္စည်းအများစုနှင့်အတူကောင်းစွာတတ်သောခါးပတ်ပေါ်တွင်တစ်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကိုတပ်သိုလှောင်မှုနှင့်လိုအပ်သောအသေးစိတ်များအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အကွာအဝေးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အခါကျစ်လျစ်သေးသွယ်ခါးအိတ်, နှစ်ဆယ်ရာစု၏ 90 နှစ်တာကာလအတွင်းအလွန်ဝယ်လိုအားဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏အသွင်အပြင်၏ထိုအချိန်ကနီးပါးမျှအာရုံကိုပေးဆောင်ခဲ့ပြီး, နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဒီလိုမျိုး၏အဓိကအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ၎င်း၏ဝင်ငွေအနီးကပ်စောင့်ရှောက်သောဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းသူခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့တွင်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာအတော်လေးကွဲပြားခြားနားကြည့် - stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများခေတ်သစ်ဖက်ရှင်တစ်ခုစတိုင်နဲ့ဆွဲဆောင်မှု image ကိုဖြည့်နိုင်မအများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့မော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ထိုသို့သောထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, သူတို့ကလုံးဝမိန်းကလေးအခမဲ့လက်ဖြစ်ကြပြီးသူမ၏ပုံမှန်အိမ်မှုဝေယျာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကြကုန်အံ့။
ခါးပတ်ပေါ်အမျိုးသမီးများသားရေအိတ်, ပိမဟုတ်ပုံစံမျိုးပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံရိပ်အတွက်ဿုံကိုက်ညီနှင့်ဒါဟာတခြားသူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရကျိုးနပ်သည်ယင်း၏ပိုင်ရှင်ကိုဆွဲဆောင်။ accessories များဒီလိုမျိုး၏အဓိကအားသာချက်ကထီးသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သူတို့ကိုမိန်းကလေးများလက်, လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
တောက်ပပြင်းထန်သောအရောင်ခြယ်သားရေများအပြင်, ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များအလွန့်အလွန်လူကြိုက်များဆောင်းပါးများ, ။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်များတောက်ပသောအရောင်အဆင်းထွန်းလင်းနှင့်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအပြုသဘောစိတ်ဓါတ်များပေးနှင့်သဘာ wear-ခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းကလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်တာရှည်ခံစေသည်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ခါးပတ်ပေါ်သားရေအိတ်သည်သူငယ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံ option ကိုရလိမ့်မည်။ ဒါဟာဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး မတည့်တုံ့ပြန်မှု , ပယ်ပျံသန်းမတက်ကြွခြင်းနှင့်အညစ်သားသမီးတို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်ရသောပထမဦးဆုံးသတိမရှိသောလှုပ်ရှားမှုမှာကိုချိုးဖျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အမျိုးသမီးများခါးပတ်အိတ်ကြီးများနှင့်ကျယ်ဝန်သောမှအသေးဆုံးကနေကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား၏နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏လက်လွှတ်ပေးခြင်းနှင့်သင့်သောအရာတို့ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုဘဲ, စျေးဆိုင်များ၏အကွာအဝေးကိုလေ့လာခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ကတည်းကအသေးစားဆက်စပ်ပစ္စည်း, စျေးဝယ်ချစ်သူများစုံလင်သည်။ စည်းကမ်းအတိုင်း, ခါးပတ်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအိတ်-ပိုက်ဆံအိတ်လုနီးပါးမတော်တဆအရေးကြီးသောဘာသာရပ်ဆုံးရှုံးများ၏အခွင့်အလမ်းဖယ်ရှားထားတဲ့ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ဘဏ်ကတ်များများအတွက်အထူးအခန်းရှိပါတယ်။
ဖက်ရှင်အမျိုးသမီးလက်ကိုင်အိတ်ခါးပတ် - မသာအလွန်အမင်းနေရာလေးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, ဒါပေမယ့်လည်းသိသိသာသာင်း၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါအရာဖက်ရှင်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပုံရိပ်ကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ နာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဂုရုနှစ်စဉ်ဒါပေါ်ရှိအခြားပစ္စည်းများနှင့်ဖန်ဆင်းခြားနား INSERT အတူတောက်ပစိတ်ကူးသူတို့နှင့်အတူ complementing အလားတူထုတ်ကုန်သစ်မူကွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်။
တစ်ဦးချင်းစီအကွိုကျမြားနှငျ့အဆင်းလှသောလိင်၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ပစ္စည်းကိုသက်သာချောင်ချိရေးပေါ် မူတည်. မိမိတို့၏ preference ကိုရေတွင်းလူသိများအမှတ်တံဆိပ်ဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းသက်သာစျေးနှုန်းမှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပူဇော်သူကိုလျော့နည်းဖောင်းပွထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး၏ထုတ်ကုန်ကြိုက်တယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အီတလီအမှတ်တံဆိပ် Gucci ကနေဆက်စပ်ပစ္စည်းမသက်ဆိုင်အသက်, များစွာသောမိန်းမဆွဲဆောင်။ သူတို့ဟာအလွန်ကြော့နှင့်သန့်စင်ပြီးကြည့်ရှု, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေ၏နီးပါးမည်သည့်ပုံရိပ်ကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခါးပတ် Gucci အပေါ်မင်းသမီးအိတ်တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဗီရိုပစ္စည်းများအများစုနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာတစ်ခုချင်းစီထုတ်ကုန်မှတ်မိလွယ်တဲ့လိုဂို, အချို့ပစ္စည်းများကိုရွှေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိပ်ပြာကဲ့သို့သောအခြားဒြပ်စင်များနှင့်အတူအလှဆင်နေကြပါတယ်။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်ထဲကအတော်များများမော်ဒယ်များကတော့တစ်လောကလုံးအရောင်အရိပ်ထဲမှာဖျော်ဖြေကြသည် - အနက်, အဖြူ, အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့်မီးခိုးရောင်။ သို့သော်တင်ပြထုတ်ကုန်များနှင့်ရှေ့အပေါ်ကြီးမားတဲ့လိုဂိုနဲ့ချုပ်၏မူလပုံစံနှင့်အတူအလှဆင်သည့်ပြင်းထန်သောအပြာအရောင်ခါးပတ်နှင့်အတူ, ဥပမာ, သူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်တစ်ဦးကတ္တီပါအိတ်အာရုံစိုက်ကြောင်းရောင်စုံရွေးချယ်စရာများစုဆောင်းခြင်း၌တည်၏။
ခါးပတ်ပေါ် Chanel အိတ်
ခါးပတ်ပေါ်ဖက်ရှင်အိတ်နှင့်သူ၏ထုတ်ကုန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်စတိုင်အသှငျအပွငျအဘို့အကျော်ကြားများမှာနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ် Chanel ၏ဌန်အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်အပေါငျးတို့သဆက်စပ်ပစ္စည်းစစ်မှန်သောသားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့, ဒါသူတို့တာရှည်ခံနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါ Gucci ဖက်ရှင်အိမ်၏အမှု၌ရှိသကဲ့သို့ Chanel မလိုအပ်တဲ့စိတ်ကူးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ဝန်မထားဘူး - အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်တစ်ဦးလိုဂိုနှင့်အတူအလှဆင် Chanel ခါးပတ်ကနေလွယ်အိတ်။
hip အိတ် Zara
ငယ်ရွယ်မင်းသမီး၌မြင့်လေးစားမှုတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်သောအမှတ်တံဆိပ် Zara မှလူငယ်ခါးပတ်အိတ်။ ထိုသို့သောထုတ်ကုန်ရိုးရိုးနှင့် succinctly မြော်လင့်သော်လည်း, ဿုံအတွက်အဝတ်အစားများဆောင်းပါးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကြသည် ပေါ့ပေါ့ရဲ့ style သို့မဟုတ်အားကစားဒေသများ။ စုဆောင်းခြင်း Zara ဥပမာအားဖြင့်, အဆင်းလှသောလိင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းကြောင်း options အမျိုးမျိုးတင်ဆက်:
နှစ်ခု patch ကိုအိတ်ကပ်နှင့်အတူပြည့်စုံနက်ပြာရောင်အရောင်များ၏ခါးပတ်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အိတ်။ ကြောင့်အထင်ကြီးအရွယ်အစားလမ်းလျှောက်တဲ့အခါအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်ဒါဟာဆက်စပ်ပစ္စည်း, မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျယ်ဝန်သောဖြစ်၏
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရှိဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောအသှငျအပွငျယခုရာသီ၌နေသော furs ဖက်ရှင် accessories များထုတ်လုပ်သူအများစု၏ညီသညျ လာ. ပါပြီ။
ခါးပတ်ပေါ် Furla အိတ်
Furlo ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်ကျစ်လျစ်သေးသွယ်အရွယ်အစားကနေအမျိုးသမီးဒီဇိုင်နာခါးပတ်အိတ်, ဒါကြောင့်သူတို့သာအများဆုံးလိုအပ်သောသွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဤအမော်ဒယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်နေရာလေးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း patch ကိုအိတ်ကပ်ရှိပါတယ်, အနည်းငယ်အတွင်းအာကာသတိုးပွားစေပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်, သာတစ်ဦးဆက်စပ်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုအဖြစ်အသုံးပြုပေမယ့်လည်းစကတ်သို့မဟုတ်ဘောင်းဘီများအတွက်ခါးပတ်၏ function ကိုဖျော်ဖြေနိုင်စွမ်းနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခါးပတ် Prada အိတ်
၎င်း၏စျေးနှုန်းအလွခု၏ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ခါးပတ်ပေါ်ဇိမ်ခံနှင့်ကြော့ Prada အိတ်, အဆင်းလှသောလိင်ကိုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးအဘို့အထုတ်လုပ်မှုဝယ်လိုအား၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် အမှတ်တံဆိပ် လည်းညှိုးနွမ်းမပြုခဲ့ခြင်း, သစ္စာစောင့်သိပရိသတ်တွေ၏နံပါတ်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။
အမှတ်တံဆိပ်၏ collection များကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်မူရင်းမော်ဒယ်များတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့မင်းသမီးနှင့်အတူအထူးသဖြင့်ရေပန်းစားသည်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တစ်ဦးစာအုပ်ပုံနဲ့ဆင်တူတဲ့ခါးပတ်ပေါ်မှာအိတ်-box ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤအဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အရောင်အကွာအဝေးအလွန်မတူညီများမှာ - အဖိုးတန်စပျစ်ရည်ကိုများအညီထုတ်ကုန်မှောင်မိုက်အစိမ်း, အပြာနှင့်အခြားအရောင်များလည်းရှိပါသေးတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အိတ်, လက်ဝတ်ရတနာ boxes တွေကိုသူတို့ကိုအထူးကျက်သရေပေးသောရွှေချထားတဲ့သော့၏ခိုင်နှင့်အတူအလှဆင်။ လူအစုအဝေးထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်ပေးဖို့ဂန္နည်းနည်းအနက်ရောင်အိတ်နှင့်အေးမြဒီဇိုင်း, ကတ္တီပါနှင့်တောက်ပမျက်စိ-ဖမ်းမော်ဒယ်များ၏မူလအပိုငျးပိုငျး - ဤအမျိုးမျိုးအပြင်, Prada နှင့်အခြားမူကွဲ၏အောက်ရှိကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ခါးပတ်ပေါ် Nike ကအိတ်
တက်ကြွလမ်း၏မိတ်ဆွေတို့ကိုမကြာခဏလိုင်းအတွက်အားကစားဖိနပ်များထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ preference ကိုပေးခြင်းနှင့်အဝတ်အစားပစ္စုပ္ပန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့ဥပမာ, အရည်အသွေးမြင့်မား, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်လက်တွေ့အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ Nike ကခါးအိတ်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှု, ပါလိမ့်မယ်။ ဤအမှုကိုလုံလုံခြုံခြုံစမတ်ဖုန်းနဲ့အခြားအရေးကြီးသောလိုအပ်ပါကအနည်းငယ်သာသောအရာတို့ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်မတော်တဆကျဆုံးခြင်းမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးခွင့်ပြုပါတယ်။
ရွရွပြေး, Nordic လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် Nike ကအမှတ်တံဆိပ်၏အခြားလှုပ်ရှားမှုများကိုအဘို့အဝတ်သေတ္တာအလွန်လွယ်ကူသည်, ဒါကြောင့်မြေပြင်ရန်၎င်း၏အမွေခံရသောသူကိုဆွဲထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့အရိပ်၏ပေါင်းစပ်ခြားနားအတွက်ကွပ်မျက်ခံရနေကြတယ်, ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင် - ဤ accessories များ stylist စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်လည်းမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် Adidas ကနေခါးပတ်ပေါ်အားကစားအိတ်ကိုလည်းတက်ကြွစွာလူနေမှုပုံစံစတဲ့၏ပရိသတ်များအပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်။ ဒါဟာတာရှည်ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုသေချာသည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပွန်းပဲ့မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်း Adidas အမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူများကများထုတ်လုပ်အတွက်အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုလူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တိုက်ရိုက်တည်ရှိသည်ရာစွဲစေခြင်းနှင့်ခါးပတ်, ပေးဆောင်။ ထိုထုတ်ကုန်၏ multi-ဇာတ်စင်ထိန်းချုပ်မှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ပယ်ကျကြနီးပါးဘယ်တော့မှကြသည်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်မှအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။
ခါးအိတ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အတော်များများကမိန်းကလေးတွေနားမလည်ကြဘူး, ဒီလိုဆက်စပ်ပစ္စည်း purchasing စဉ်းစား, ဘာခါးပတ်ပေါ်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဗီရိုပစ္စည်းများအရသာမရှိသောနှင့်မသေချာသောအထူးအဖြစ် branded ခံရရှောင်ရှားရန်ပေါင်းစပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးချင်းစီကမိန်းကလေးသူမ၏အကြိုက်ရပါလိမ့်မယ်သောတဦးတည်းကိုရှေးခယျြနိုငျသောသူတို့တွင်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ခါးပတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဂန္သို့မဟုတ်မြင့်မားသောခါးနှင့်အတူဘောင်းဘီနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူအကြီးကြည့်ပါ။ မဆိုးပေါင်းစပ်နှင့်တိုက်ရိုက်အခမဲ့သို့မဟုတ် semifitted ဖြတ်ရှိသည်နိုင်မယ့်ဣတ္စားဆင်ယင်နဲ့ ensemble ဖြစ်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကို Making, သင်ဂန္အတူကပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် ခဲတံစကတ် , သို့သော်ဤအမှု၌ကြောင့်ခါးအဆငျ့ကိုအောက်တွင်အိတ်စီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ကွန်ဂိုပုတီး - သီးသန့်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော
နာရီ Hublot Genève
ရုရှား၌အီတလီဖက်ရှင်၏ Adventures ကို
Eructation လေကြောင်းရန် - ကုသမှု
အချိန်မတန်မီကလေးမွေးဖွား - အကြောင်းရင်းများ
အားနည်းခြင်းနှင့်ထိနမိဒ္ဓ - အကြောင်းရင်းများ
ကဏန်းတုတ် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
ကြောင်တစ်ကောင်တစ် leash ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
သားသမီးတို့အဘို့ထိပ်တန်း 20 အရှိဆုံးအသုံးထုတ်ကုန်
နှောက်အမြှေးရောင် - ကုသမှု
Azu ကြက်ဆင် -4အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ